အမေးအများဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ “ကျွန်ုပ်တို့အတွက် internet speed ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ” ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စဟာ သင့်အိမ်တွင် device ဘယ်လောက်များများ သင်အသုံးပြုနေသလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကို သင်အသုံးပြုနေသလဲ (ဥပမာ - သာမန် အင်တာနက်ကြည့်ရုံ (သို့) streaming ပြုလုပ်ဖို့) ဆိုတာများအပေါ်တွင် မူတည်နေပါတယ်။
သာမန်အသုံးပြုသူမိသားစုများအတွက်တော့ bandwidth ကိုအများဆုံးအဆုံးပြုသည်မှာ ဖျော်ဖြေရေး content များကို streaming (သို့) download ပြုလုပ်၍ ကြည့်ရှုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အင်တာနက် ကိုအသုံးနေရတဲ့ အခြားအရေးပါတဲ့အရာများလဲ ရှိနေပါသေးတယ်။
- ၂ နာရီကြာမြင့်မည့် ရုပ်ရှင်တစ်ကားဟာ 2GB ခန့် ဒေတာပမာဏရှိနိုင်ပြီး 4Mbps ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူအသုံးပြုနေပါက download ဆွဲရန်အတွက် ၁နာရီ ၁၅မိနစ်ခန့် ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ internet speed ကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် content ကို download ဆွဲဖို့ ကြာမြင့်နိုင်တဲ့အချိန်ကို လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တူညီတဲ့ ၂နာရီကြာ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို download ဆွဲရာတွင် 8Mbps connection နဲ့ ဆိုပါက ထိုထက် တစ်ဝက်ခန့်သာ ကြာမြင့်နိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
- Streaming ပြုလုပ်ခြင်းကတော့ ဒီအရာနဲ့ အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ Netflix ရဲ့အဆိုအရ SD streaming အတွက် .05Mbps ကို အနည်းဆုံး လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး SD အတွက် ရှိသင့်တယ်လို့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ speed ကတော့ 3.0Mbps ဖြစ်ပြီး HD အတွက်မှာတော့ 5.0Mbps ရှိသင့်ပါတယ်။ သင်က ရုပ်သံများကို 4K ဖြင့် ကြည့်ရှုလိုပါက အနည်းဆုံး 16Mbps ခန့်ကို အသုံးပြုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- သီချင်းများကို streaming ပြုလုပ်၍ နားထောင်ခြင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက် connection အနည်းငယ်သာအသုံးပြုရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကနေ နားထောင်နိုင်ဖို့အတွက် .096Mbps မြန်နှုန်းသာလိုအပ်ပြီး သင့်ကွန်ပြူတာမှဆိုပါက .1670Mbps မြန်နှုန်းသာ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
- E-mail ပေးပို့ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ attachment များ မပါဝင်တဲ့ သာမန် email တစ်စောင်ဟာဆိုရင် 75 kilobits ခန့် ရှိမှာဖြစ်ပြီး ထိုအရာက 0.075 megabits နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ File များပါဝင်တဲ့ e-mail များက တော့ File ရဲ့ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲများ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
- PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ကဲ့သို့သော Device များပေါ်တွင် online game ကစားခြင်းအတွက် Bandwidth usage ဟာတော့3–6Mbps ရဲ့အောက်နှင့် .75 – 1 Mbps ရဲ့ အထက်တွင် ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ player တစ်ဦးအတွက် device တစ်ခုအပေါ်တွင် တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
- 2-way video call တစ်ခုအတွက် Skype က 1.5 Mbps download နဲ့ 1.5 Mbps upload ရှိနေသင့်တယ်လို့ သတ်မှတ်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ လူအများနဲ့ video call များ ပြုလုပ်ဖို့ရာမှာတော့ အနည်းဆုံး 8 Mbps download ရှိနေသင့်ပါတယ်။
- Facebook အသုံးပြုသူများကတော့ သာမန်ကြည့်ရှုနေစဉ်တွင် 0.03 Mbps ခန့်ကို အသုံးပြုရသော်လဲ video များကို Facebook ပေါ်မှကြည့်ရှုမယ်ဆိုပါက ဒီလိုအပ်ချက်ထက်ပိုမိုများပြားသော ပမာဏကို လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
- Internet ချိတ်ဆက်ရတဲ့ Home Security နဲ့ Automation device များဟာ 1Mbps ထက်ပိုသော speed ကို အသုံးပြုရပါတယ်။
- Smartphone များနဲ့ tablet များကတော့ မိမကအသုံးပြုနေခြင်းမရှိရင်တောင်မှ 1 Mbps ခန့်ကို အလိုအလျှောက် အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
- Alexa ဟာ အသုံးမပြုပဲထားမယ်ဆိုပါက 1 Mbps ခန့်ကို အသုံးပြုနေမှာဖြစ်ပြီး သီချင်းများ streaming ပြုလုပ်ခြင်း (သို့) မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရာတွင် နောက်ထပ်အပို .51 Mbps ခန့်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Smart Home Device များကို ညွှန်ကြားခိုင်းစေခြင်းပြုရာတွင်တော့ Alexa က device တစ်ခုစီအတွက်5Mbps ခန့်ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး video ပါဝင်တဲ့ device များအတွက်ကိုတော့ 10 Mbps ခန့်အသုံးပြုရပါ တယ်။ ဒီ device များအတွက် ရှိသင့်တယ်လို့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ upload speed ကတော့3Mbps ခန့်ရှိသင့် ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီ device များဟာ သင့်ရဲ့ဖုန်းများ၊ tablet များ (သို့) smart assistant များထံသို့ သတင်းအချက်အလက်များကို တင်ပို့နေရတဲ့အတွက်ပါ။ Virtual assistant များနဲ့ smart home hubs များအားလုံးအတွက် ယျေဘူယျအားဖြင့်တော့ ထို့နည်းတူပါပဲ။ Smart TV နဲ့ streaming device များတွင် လိုအပ်လာနိုင်တဲ့ bandwidth ပမာဏဟာ သင်ဘာကို streaming ပြုလုပ်နေသလဲ (ဥပမာ - live, HD, SD, 4K) အစရှိသည့်အရာများအပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲများရှိလာနိုင်ပါတယ်။
- ရိုးစင်းစွာပြောရမည်ဆိုလျှင် telecommuting (online ပေါ်မှ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း) ပြုလုပ်ရန်အတွက် သင်လိုအပ်နိုင်တဲ့ internet speed ဟာ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ apps များ၊ device များနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲများ ရှိလာနိုင် ပါတယ်။ ဥပမာ - telecommuting ပြုလုပ်ခြင်းတွင် အတွေ့များတတ်တဲ့ အရာတစ်ခုဟာ ရုပ်သံ အစည်းအဝေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရာအတွက် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သလို အနည်းဆုံး 1.5 Mbps download နဲ့ upload speed ရှိနေဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ telecommuting ပြုလုပ်သူတစ်ဦးအနေနနဲ့2Mbps download နဲ့ 1 Mbps upload အချိန်ပြည့် ရရှိနေဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ သို့သော် telecommuter တစ်ဦးအနေနဲ့ 25 Mbps download/2Mbps download ခန့်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုသင့်တယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ Online သင်တန်းကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် အနည်းဆုံး 1.5 Mbps download နဲ့ upload ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အိမ်မှတဆင့် အိမ်စာများကို online ပေါ်တွင်လုပ်နေရသော ကလေးများအတွက်လည်း ထို့နည်း၎င်းပင် လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
- အဝေးမှဆေးဝါးပေးကုသခြင်း ကျွမ်းကျင်သူ (Telemedicine experts) များကတော့ telehealth ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် အနည်းဆုံး 15 Mbps upload/3Mbps download ကို လိုအပ်မှာဖြစ်တာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံကြည့်ရှုလိုက်ပါက လူဦးရေ ၄ဦးမှ ၅ဦးအထိရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုတွင် bandwidth အသုံးပြုမှုပမာဏဟာ တိုင်းတာသည့်အချိန်တိုင်းတွင် တစ်ဦးလျှင် 2-5 Mbps ခန့်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် 20 – 25 Mbps bandwidth ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် သတ်မှတ်အကြံပြုလိုပါတယ်။ အင်တာနက်မျှဝေအသုံးပြုရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ - DIA မဟုတ်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုက်ပါက ဝန်ဆောင်မှုများဟာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၅၀% အောက်သို့ လျော့ကျသွားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့် ISP များက သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် 35 – 40 Mbps ခန့်ကိုအသုံးပြုသင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားကြပါတယ်။
၎င်းအတွက် အဓိကကြောင်းအရင်းနှစ်ခုရှိပါသည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ တခြားသူများသည် ဝန်ဆောင်ခကို ဈေးကြီးကြီးယူ ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ ပိုပြီးအရေးကြီးသည့်အချက်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထိပ်တန်း engineer များရှိနေပြီး ၎င်း engineer များဟာ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုသည့်အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနည်းပညာသည် Data Network များကို စီမံထိန်းချုပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်မြန်နှုန်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အရာတွေ များစွာရှိနေပါတယ်။ ဒီအရာများတွင် သင့်ရဲ့ကွန်ပြူတာမှ ဒေတာစင်တာသို့ အကွာအဝေးနဲ့ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ internet provider က သင့်ရဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အတိုး၊ အချ ပြုလုပ်နေသလားဆိုတာတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ အချို့သော provider များက သင့်ရဲ့ အင်တာနက်မြန်နှုန်းများကို သင်ကပမာဏတစ်ခုအထိ content များကို download ပြုလုပ်ပြီးသည့်အခါ လျှော့ချလိုက်တတ်တာသော်၎င်း၊ အချို့သောဝန်ဆောင်မှုများကို လျှော့ချလိုက်တာသော်၎င်း ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ထံတွင် network ပေါ်သို့ download နဲ့ upload ပြုလုပ်နေတဲ့ ကွန်ပြူတာများစွာရှိနေပါကလည်း သင့်ရဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းအပေါ် ဒီအရာက သက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။
သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ internet connection က ဘယ်လောက်မြန်ဆန်သလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးလိုပါက www.speedtest.net သို့သွားရောက်ပြီး "begin test" ဆိုသည့် ပုံပေါ်ကစာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ မှတ်သားထားရမည့် အချက်တစ်ခုကတော့ ဒီ speed test ဟာ သင့်တည်နေရာအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ connection ဟာ ဘယ်လောက်မြန်ဆန်မှုရှိနိုင်သလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီ test ကို မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးမြို့အတွက်ကို သေချာစွာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ။
သတိပေးချက် - speed test အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေများစွာရှိနေပါတယ်။ တိကျမှုဟာ ၃၀% ခန့် ကွဲလွဲမှုများရှိနေနိုင်ပြီး မျှဝေအသုံးပြုရတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းများဟာ အမြဲတမ်း အမှန်တကယ်ရရှိသည်ထက် ပို၍ပြသနေတတ်ပါတယ်။ speedtest.net ဆာဗာပေါ်တွင်ရှိနေမည်မှာသင်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ခြင်း၊ သင်က မြန်နှုန်းများကို provide ရဲ့ server ကနေစစ်ဆေးနေတာမဟုတ်ပဲ သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကနေ စစ်ဆေးနေခြင်း၊ အစရှိသည့်အရာများကြောင့်လည်း သက်ရောက်မှုများရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ ထို speed test က သင့်ရဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းဟာ သင့်ကို ကတိပေးထားတာထက် တစ်ဝက်ခန့် လျော့နည်းနေတယ်ဆိုပါက ဒါဟာပြဿနာရှိနေပြီကို ပြသနေတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘက်ကလဲ မတူညီတဲ့အချိန်များတွင် ထပ်မံစမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါသေးတယ်။
3.Bytes နဲ့ bits များသည် Data Transfer မြန်နှုန်းပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိပါသလဲ?
Data အတွက် မြန်နှုန်းကို အင်တာနက်မှတဆင့် transfer လုပ်ပြီး byes per second (B/s) သို့မဟုတ် bits per second ( bps) ဖြင့် တိုင်းတာပါသည်။ ကုမ္ပဏီတော်တော်များသည် သူတို့၏ မြန်နှုန်းကို bps ဖြင့် ဖော်ပြရန် ရွေးချယ်ကြပါသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နံပါတ်များသည် ကြီးကြီးဖြင့် ပေါ်လာသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ အင်တာနက် connection တွင် မတူညီသော မြန်နှုန်းနှစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ Download Speed နှင့် Upload Speed တို့ဖြစ်ပါသည်။ Internet Service Provider များသည် ၎င်းတို့၏ Maximum Download Speed ကိုသာ ပေးလိုကြပါသည်။ Download Speed ဆိုသည်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ web page တစ်ခုကနေ သီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေကို လူကြီးမင်းရဲ့ ကွန်ပျူတာက ဘယ်လောက်မြန်မြန် Download လုပ်နိုင်လဲဆိုသည်ကို ပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် cloud ပေါ်တွင် File များကိုသိမ်းဆည်းလိုပါက လူကြီးမင်းသည် လူကြီးမင်း၏ ISP က upload speed မည်မျှရှိသည်ကို မှတ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ Upload Speed ဆိုသည်မှာ data များကို လူကြီးမင်း၏ ကွန်ပျူတာမှတဆင့် အင်တာနက်သို့ပေါ်သို့ မည်မျှအချိန်အတွင်း ပေးပို့နိုင်မှုကို ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။
VNet မှ ဖိုင်များကို upload လုပ်သည့်အခါ လူကြီးမင်းသည် 125KB/s မြန်နှုန်းကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် 1Mbps မြန်နှုန်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့တွင် ရှင်းပြသကဲ့သို့ 1 byte သည် 8 bits နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို လေ့လာပါ။
4.125Kb/s မြန်နှုန်းရှိအင်တာနက်လိုင်းက ဘာလို့ 1MBps မြန်နှုန်းရှိအင်တာနက်လိုင်းနဲ့ တူညီနေတာလဲ?
ဒီနေရာမှာ Kb/s နဲ့ MBps တို့အကြား ရောထွေးမှုအချို့ရှိနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့က ဘာကြောင့် အင်တာနက် speed များကို ဒီအရာတွေထဲက တစ်ခုခုနဲ့တိုင်းတာရသလဲဆိုတာကို သိချင်ကြမှာပါ။ အများအားဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူက ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်က အင်တာနက်မြန်နှုန်းစစ်ဆေးသူများကတော့ အခြားကိန်းဂဏန်းတစ်ခုနဲ့ ဖော်ပြနေပါတယ်။ လူအတော်များများက 1Mbps ဆိုတာက 1MB/s နဲ့ ညီမျှတယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ကယ်တမ်းမှာတော့ မှားနေပါတယ်။
Bytes နဲ့ Bits များ
ဒီရောထွေးမှုဟာ အဓိကအားဖြင့် bytes နဲ့ bits များကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေက ဒေတာပမာဏကိုတိုင်းတာဖို့အတွက် မတူကွဲပြားတဲ့ နည်းလမ်း ၂မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ၂ခုဟာ ဆင်တူနေသော်လည်း 1 bytes ဟာ 8 bits နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ရောထွေးမှုများကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် bytes နဲ့ bits များကို ရေးသားရာတွင် ကွဲပြားအောင်ရေးသား ကြပါတယ် - bytes များကို "B" အကြီးစာလုံးနဲ့ ရေးသားကြပြီး bits များကိုတော့ "b" အသေးစာလုံးနဲ့ ရေးသားကြပါတယ်။
အလွန်များပြားတဲ့နံပါတ်များကိုရေးသားရမည့်အစား ကျွန်ုပ်တို့က bytes များကို Kilobytes (KB) နဲ့ Megabytes (MB) ဟူ၍သုံးနှုန်းတတ်ကြပါတယ်။
kilobits (Kb) နဲ့ megabits (Mb) တို့ကိုလည်း ထို့နည်းတူပဲ ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။
5.ဈေနှုန်းတွေက ဘာလို့ အရမ်းကို သင့်လျော်နေရပါသလဲ?
၎င်းအရာအတွက် အကြောင်းပြချက်အချို့ ရှိနေပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့က အခြား operator များနဲ့ မတူတဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် အင်တာနက် connection ကို တည်ဆောက်/ တပ်ဆင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများလည်းရှိနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးရမည့်ချေးငွေနှင့် အလွန်များပြားတဲ့ လခများကိုရယူမထားတဲ့ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တည်ငြိမ်၊ သက်သာတဲ့အင်တာနက်လိုင်းများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိလူတိုင်း သုံးစွဲ၍ ရနိုင်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
6.အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ
VNet ရဲ့ အင်တာနက်လိုင်းများကို အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအင်တာနက်လိုင်း အမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားသည်မဆို ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြင့်မားဆုံးသော အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ရရှိနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
7.အော်ဒါတင်လိုက်သည်နှင့် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
အော်ဒါတင်သည့်အချိန်တွင် ငွေပေးချေမှုကို ပြုလုပ်ရန်မလိုပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို တပ်ဆင်ပြီးသည့်အခါမှသာ ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
8.Subscription လုပ်ထားသော ပမာဏကို ဘယ်အချိန်မှာ၊ ဘယ်လိုပေးချေရမှာလဲ?
လူကြီးမင်းသည် သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် Plan Detail အား installation လုပ်ပြီးနောက် "Subscription ပြုလုပ်ထားသည့် ပမာဏအတိုင်း" ကိုပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Subscription ပြုလုပ်ထားသည့် ကျသင့်ငွေပမာဏကို အဆင်ပြေသည့် နည်းလမ်း ၃ ခုဖြင့် ပေးချေနိုင်ပါသည်။
Subscription ပြုလုပ်ထားသည့် ပမာဏအတိုင်း ငွေပေးချေခြင်းကို သေချာစွာ ဖြည့်သွင်းထားသည့် Subscriber Registration Form (SRF) နှင့် အတူ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
9.Installation Charges အပြင် နောက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါသေးသလား။
10. CPE ဆိုတာဘာလဲ? CPE ကို မည်သည့်နေရာမှာ install လုပ်မှာလဲ?
Customer Premise Equipment Device ( CPE Device) ဆိုသည်မှာ Telecommunication Hardware Device ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အသုံးပြုသူ၏နေရာတွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း equipment တွင် cable သို့မဟုတ် satellite television set-top boxes, DSL သို့မဟုတ် အခြားသော internet routers, VoIP base stations, telephone handset များနှင့် အခြားသော customized hardware တို့ ပါရှိနိုင်ပါသည်။ CPE ကို ငှားရမ်းနိုင်သလို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CPE တွင် Communication Service ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည့် interior wiring ပါရှိပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် မည်သည့် အသုံးပြုသူဘက်သို့ တပ်ဆင်ရသည့် Equipment ကိုမဆို Customer Premise Equipment ဟု ခေါ်နိုင်ပါသည်။
11.ဝန်ဆောင်မှုရရှိရန်အတွက် process မှာ မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်း။
ဝန်ဆောင်မှုရရှိရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များက ဘာတွေလဲ?
Vnet မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် Secured Wireless Broadband or FTTH (fiber optics to home) မှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁. Vnet ၏ ခွင့်ပြုချက်ရထားသော အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များမှ ရှင်းပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး Tariff Plan ကို အပြီးသတ်ပေးပါမည်။ ထို့နောက် အမှာစာကို မှတ်ပုံတင်ပါမည်။ ( ဤအဆင့်တွင် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန်မလိုပါ)။
၂။ အမှာစာကို တင်ပြီးသည်နှင့် လူကြီးမင်း အမည် ၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေလ်နှင့် tariff plan ကို မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အတွက် ခေါ်ဆိုမှုကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ Vnet ၏ authorized representative သည် မှာယူသူ၏ အဆိုပြုချက်အတိုင်း Service Demo ကို ရှင်းပြရန်အတွက် Appointment ရယူပြီး လာရောက်တွေ့ဆုံပါမည်။ ထို့နောက် လူကြီးမင်းသည် "Installation လုပ်မည့်နေရာတွင် Service Demo ကို အောင်မြင်စွာ ရယူနိုင်ရန်" မှာယူထားသည့်ပမာဏကို ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ဝန်ဆောင်မှုအား installation ပြုလုပ်ခြင်းကို subscription amount အား အတည်ပြုပြီး ၃ရက်အတွင် အပြီးပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Cheque ဖြင့် ပေးချေပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် install ပြုလုပ်ရန် ၆-၁၀ ရက်ကြာမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ Installation အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ရန် Vnet မှ လူကြီးမင်းအား Subscriber Registration Form ( SRF) ကို ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းဖောင်တွင် လိုအပ်သော information များကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများကို submit ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
I. မိမိရဲ့ ID ( နိုင်ငံသားကတ် ) ( A4 ဆိုဒ် မိတ္တူ )
II. မိမိရဲ့လိပ်စာ (အိမ်ထောင်စုဇယား) ( A4 ဆိုဒ် မိတ္တူ )
III. ရောင်စုံဓာတ်ပုံ ပတ်စပို့ဆိုဒ်
I. ဗီဇာစာရွက် မိတ္တူ
II. ပတ်စပို့ မိတ္တူ
III. ထောက်ခံသူ ဒေသခံ ၂ ဦး၏ (အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email ID)
လူကြီးမင်းသည် User ID ကို လူကြီးမင်းမှတ်ပုံတင်ထားသော Email နှင့် Mobile Number တွင် လက်ခံရှရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Installation ပြုလုပ်ပြီးပါက Vnet ရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ (ကိုယ်စားလှယ်မှ) Login Page မှ တဆင့် Vnet Broadband ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း၏ User Name နှင့် Password ကို Vnet ၏ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင် မည်သူ့ကိုမှ ပေးစရာမလိုအပ်ပါ။
12.Broadband တစ်ခု တပ်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ပြောင်းလဲနိုင်မလဲ?
လူကြီးမင်းတို့ဘက်က လုပ်ရမယ့် တစ်ခုတည်းသောအရာက package တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး Sign Up လုပ်ဖို့ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့က လူကြီးမင်းတို့အတွက် အထူး promotion တစ်ရပ်အနေနဲ့ လူကြီးမင်းတို့လက်ရှိပေးနေရတဲ့ နှုန်းထားအတိုင်းကို မြန်နှုန်း ၂ဆဖြင့်ရရှိနိုင်မယ့် ကမ်းလှမ်းချက် (သို့) လက်ရှိမြန်နှုန်းအတိုင်းကို ပေးရတဲ့နှုန်းထား တစ်ဝက်ခန့် လျှော့ပေးမည့် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုကိုလည်း ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
13.အော်ဒါတင်လိုက်သည်နှင့် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
အော်ဒါတင်သည့်အချိန်တွင် ငွေပေးချေမှုကို ပြုလုပ်ရန်မလိုပါ။
14.Bandwidth မည်မျှကို ဝယ်ယူသုံးစွဲသင့်ပါသလဲ?